Banyere anyị - Chengdu Dien Photoelectric Technology Co., Ltd.
Daalụ maka ịhọrọ DIEN TECH! Anyị bụ ndị ọkachamara emeputa na soplaya nke a usoro crystal dabeere ihe! Anyị na-elekwasị anya n'arịrịọ ndị ahịa na-arịọ ma melite onwe anyị dị ka nzaghachi nke nwere ike iweta ahụmịhe kacha mma nke imekọ ihe ọnụ na anyị. Na DIEN TECH, anyị nwere oke mmasị itinye ndị nwe anyị n'ọrụ nyocha na ịchọpụta teknụzụ ọhụụ nke na-eduga na ọkwa ọhụrụ nke ngwa na ndị ahịa anyị. . Anyị na-amụta ihe site na ihe anyị mere ma na-eme onwe anyị ka anyị mee nke ọma. Lee na DIEN, anyị na-ahọrọ ndị otu anyị nwere ụkpụrụ na-emeghe ma sie ike, anyị nwere ndị dọkịta merela ihe na kristal karịa afọ 12 ma wetara anyị na anyị ndị ahịa, anyị nwere ndị ọrụ ibe anyị ndị na-ege ntị nke ọma na ịmụ akwụkwọ site na ọrụ ma gbalịa ịba ụba ahụmịhe ha iji ghọta ndị ahịa ka mma.
-Leon Lee Onye isi ala
Mmepụta ahụ na-emezu ihe niile European chọrọ na ụkpụrụ ụwa. N'ịchịkọta mmekọrịta anyị na ndị ahịa anyị, DIEN TECH na-enyere ndị injinia aka ime nchọpụta ọfụma na imepụta ihe ọhụụ na-eme ka arụmọrụ nke ngwa ha ka mma. Isi ụlọ ọrụ dị na Chengdu, China, DIEN TECH ya na ndị otu egwuregwu ya na ndị na-ekesa ya azụlitela ndị ahịa n’ụwa niile, gụnyere USA, Europe, Asia, South Asia. Maka ọdịnihu, DIEN TECH agaghị akwụsị nzọụkwụ ya na otu n'ime ndị na-ebugharị ngwa ahịa fotoelectric kachasị tụkwasịrị obi n'ụwa.
DIEN TECH raara onwe ya nye iji wuo ọtụtụ ngwaahịa na ngwọta ya, ntọala nke nkwado ahịa na aha siri ike n'etiti ndị ahịa ya. Na iji zutekwuo mkpa ndị ahịa ya yana ịzụlite ngwa anya na-arụ ọrụ na Crystal.